Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Huawei dia nanambara ny fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny IATA
Tao amin'ny PassPO Terminal EXPO 2018 tao Stockholm, nanambara i Huawei androany fa nanatevin-daharana ny Programme Partnership Strategic an'ny International Air Transport Association (IATA). Amin'ny alàlan'ity Fandaharana ity, Huawei dia hampiasa ny fanavaozana ny talenta sy ny fahaizany mandroso amin'ny fampandrosoana ny seranam-piaramanidina sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny ho avy, hanatsara ny traikefan'ny mpandeha ary hanatsara ny asan'ny entam-barotra.
Ny fampiroboroboana ny indostrian'ny seranam-piaramanidina iray dia famantarana lehibe amin'ny fandrosoany ara-toekarena, teknika ary sosialy. Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina miroborobo dia mitaky fiaraha-miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, ary ireo mpandray anjara hafa tafiditra amin'ny sehatry ny indostria. Miankina amin'ny fivoaran'ny fenitry ny indostria manerantany sy ny fizotrany ary ny fampiharana ireo teknolojia vaovao izay manakiana ny fanovana ny indostria. Ny fahatongavana ho mpikambana ao amin'ny IATA Strategic Partnership Program dia nanolotra fotoana mety ho an'i Huawei hanitatra ny fahavononany hampandroso ny indostrian'ny fiaramanidina. IATA dia fikambanan'ny mpivarotra kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eran'izao tontolo izao, izay niforona tamin'ny volana aprily 1945 tao Havana, izay misolo tena ny kaompaniam-pitaterana 280 misy firenena 120, izay mandrakotra ny 83% -n'ny fifamoivoizana an'habakabaka. Ny fanampiana matihanina dia omena ny mpandray anjara amin'ny indostria rehetra miaraka amina vokatra sy serivisy manam-pahaizana marobe, ao anatin'izany ny famolavolana ny politikan'ny indostria hamahana ny olan'ny sidina.
Manararaotra ny fanavaozana mitohy, ny vokatra sy vahaolana ary serivisy Huawei an'ny Huawei dia noraisin'ny seranam-piara-manidina mihoatra ny 50, seranam-piaramanidina ary manampahefana mifehy ny fifamoivoizana. Ny mpanjifa dia ahitana seranam-piaramanidina eran-tany mihoatra ny 15 miaraka amin'ny mpandeha 30 tapitrisa mahery isan-taona. Amin'ny alàlan'ny programa IATA Strategic Partnership, Huawei dia hampihatra TIC vaovao hanamafisana ny fanovana nomerika ny indostrian'ny fiaramanidina. Izy io dia hanampy ny mpanjifa hanangana seranam-piaramanidina maranitra sy seranam-piaramanidina izay mavitrika, mahomby, miara-miasa, manavao, ary vonona amin'ny vanim-potoana manan-tsaina, mivory amin'ny seranam-piaramanidina ', seranam-piaramanidina sy mpandeha ho an'ny fiarovana, fahombiazana ary serivisy manokana.
"Ny programa fiaraha-miasa stratejika IATA dia misokatra ho an'ireo orinasa izay manome lanja sy mitondra tombony ho an'ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka mivantana sy ankolaka amin'ny alàlan'ny serivisy, ny vokatra ary ny vahaolana", hoy i Mark Hubble, filoha lefitra zokiolona IATA, Serivisy ara-barotra sy varotra. "Faly izahay mampiditra an'i Huawei ao amin'ny fianakavianay izay mpiara-miasa stratejika."
Yuan Xilin, filohan'ny Sehatra fitaterana ao amin'ny Huawei Enterprise BG, dia nilaza hoe: “Faly i Huawei hanatevin-daharana ny fandaharanasa fiaraha-miasa stratejika an'ny IATA. IATA dia manome sehatra iray sarobidy ho an'ireo mpikambana hiara-hiasa amin'ireo mpitarika sidina hafa amin'ny sehatry ny fiaraha-mientana, ary ahafahan'ny kaompaniam-pitanterana misitraka vokatra marobe sy ny fahaiza-manao mahomby hahatratrarana asa azo antoka, mahomby kokoa ary mahomby. Ny vinan'i Huawei dia ny hitondra dizitaly ho an'ny olona, ​​trano ary fikambanana ho an'ny tontolo manan-tsaina mifamatotra. Miaraka amin'ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina eran-tany mivoatra mankany amin'ny Smart Airport sy Smart Airlines, Huawei dia manolo-tena ho mpiara-miasa tsara indrindra amin'ny fanovana nomerika aviation amin'ny alàlan'ny fanomezana vahaolana Tontolo iainana tokana hanampiana ny mpanjifa hanatsara ny serivisy ary hamorona traikefa an-dàlan'ny mpandeha. Hiaraka hikaroka vahaolana izay manohintohina ny hoavin'ny indostrian'ny fiaramanidina izahay. ”
Ao amin'ny PassPO Terminal EXPO 2018, Huawei dia mampiseho vahaolana feno momba ny TIC izay mandrakotra ny rahona hybrid fiaramanidina, tamba-jotra mailaka amin'ny seranam-piaramanidina, ary ny fiasan'ny seranam-piaramanidina. Huawei dia miara-miasa amin'ireo seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina malaza manerantany amin'ny maodely vaovao amin'ny rahona fiaramanidina, ny fanatsarana ny traikefa amin'ny mpandeha ary ny vahaolana amin'ny asa hita maso. Huawei dia nanatanteraka vahaolana tamim-pahombiazana ahitana rahona, Internet of Things (IoT), Big Data, ary tambajotram-pifandraisana ho an'ny mpanjifa fiaramanidina manerantany. Izany dia tratra tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny ekipa teo an-toerana sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny tontolo iainana marobe amin'ny firenena 170 sy faritra manerana an'izao tontolo izao. Hatramin'izao, 197 amin'ireo orinasa Fortune Global 500 sy 45 amin'ireo orinasa Top 100 no nifidy an'i Huawei ho mpiara-miasa amin'ny fanovana nomerika.
Boeing dia manolotra 737 MAX 9 voalohany
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny iraisam-pirenena 40.3 tapitrisa 2017, ny fizahan-tany UK dia hiatrika bumper 2018